တရုတ်နိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ယခုနှစ်ကုန်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ သန်း ၁၀၀ စာ ထပ်မံ လှူဒါန်းမည်ဟု ရှီကျင့်ဖိန်ပြောကြား - Xinhua News Agency
အောကပ်စ် (AUKUS) သဘောတူညီချက်အပေါ် စိုးရိမ်မိကြောင်းနှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဆောင်ရန် အီးယူခေါင်းဆောင်များ တောင်းဆို
ရုရှားပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲများအတွင်း ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု၏ ထက်ဝက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ဟု ရုရှားသံရုံးပြော
ပေကျင်း ၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက COVAX အစီအစဉ်သို့ အမြင့်ဆုံးအလှူငွေထည့်ဝင်သူအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ လှူဒါန်းကာ ယခုနှစ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ သန်း ၁၀၀ စာ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ရှီက ၁၃ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပေကျင်းမြို့မှနေ၍ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထိုသို့ ကြေညာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာသို့ စုစုပေါင်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၂ ဘီလံယံ စာ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ပြောကြားခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ နိုင်ငံ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ၁၀၀ ကျော်အား ကာကွယ်ဆေး အမြောက်အများနှင့် ကုန်ချော ၁ ဘီလီယံကျော်အား ထောက်ပံ့ပေးထားပြီဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept.9(Xinhua) — China will donate 100 million more doses of COVID-19 vaccines to developing countries within this year on top ofadonation of 100 million U.S. dollars to COVAX, said Chinese President Xi Jinping on Thursday.
Xi made the announcement in Beijing while addressing the 13th BRICS summit via video link.
China will strive to provideatotal of2billion doses of COVID-19 vaccines to the world by the end of this year, said Xi, noting that China, to date, has provided more than 1 billion doses of finished and bulk vaccines to over 100 countries and international organizations. ■
Photo – Staff members transport the COVID-19 vaccine donation from China at the Bandaranaike International Airport on the outskirts of Colombo, Sri Lanka, July 27, 2021. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)